၁။ တပ်မတော်သားများ ဒီမိုကရေစီ သဘောတရားများ နားလည်လာစေရန်။
၂။ တပ်မတော်သား များအနေဖြင့် နိုင်ငံရေး အသိတရားများ ပြန်လည် သိရှိလာစေရန်နှင့် သိရှိ လာခြင်းအားဖြင့် ယနေ့ နိုင်ငံရေး
ပြဿနာများသည် စစ်ရေးဖြင့်ဖြေရှင်း နိုင်ခြင်းမရှိသည်ကို သိရှိနားလည်လာစေရန်။
၃။ အသိပညာများ ရရှိလာသည်နှင့်အမျှ ပြည်သူလူထုအပေါ်တွင် စာနာနားလည်သည့် တပ်မတော်သားများ ပေါ်ထွန်းလာစေရန်။
၄။ ပြည်သူလူထုမှလည်း တပ်မတော်သားများ၏ အခက်အခဲများ၊ လက်ရှိ နားလည်ရန် ခက်ခဲနေသေးသော အမိန့်နှင့် တာဝန် ပိုင်းဆိုင်ရာများကို သိနားလည်ပေးပြီး အဓိကပြဿနာ၏ အဖြေကို ရှာဖွေ လာနိုင်စေရန်။
၅။ ထိုသို့ တပ်မတော်နှင့် ပြည်သူတို့မှ အပြန်အလှန်နားလည်လာပြီး မိမိတို့ဦးတည်သည့် အနာဂတ်ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတော်ကြီးတွင်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုး မပေါ်ပေါက်ရေး အ တွက် အစဉ်လက်တွဲ တွန်းလှန်သွားရန်။
ကျနော့်နာမည်က ရဲထက် ပါ။ ၂၀၀၇ ဒီဇင်ဘာ ၁၄ တွင် စစ်တက္ကသိုလ် အမှတ်စဉ်(၅၀)မှ ကျောင်းဆင်းပြီး အမှတ်(၃၁၂) အမြောက်တပ်ရင်းတွင် တာဝန်ကျခဲ့ ထိုမှ မိတ္ထီလာ မုန်တိုင်တွင် အမြောက်တပ်စုမှူးသင်တန်း ဗထူးတပ်မြို့ရှိ Myanmar Army Combat Forces School တွင် ခြေလျင်တပ်စုမှူးသင်တန်း ထိုမှ ၂၀၀၈ စက်တင်ဘာ ၁၅ တွင် ပြင်ဦးလွင် စာပေဌာန(၂)သို့ ဘာသာစကားသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၉) တက်ရန်သွားခဲ့ ထိုမှ အထက်အစီအစဉ်များအရ သင်တန်းနှစ်သုတ်ခွဲရာ ပြည်တွင်းမဟာသိပ္ပံ(၂) တွင်စတင်တက်ရောက် ၂ နှစ်အစီအစဉ်ဖြင့် ဘွဲ့ပေးမည်ဆိုပြီး အမှန်တကယ် ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် မပေးဘဲ ၃ နှစ်အစီအစဉ်ပြောင်းခဲ့သည်။ ယင်း ၂၀၁၀ ဇန် ၁၁ ရက်နေ့တွင်
ပြင်ဦးလွင် ကုတင်(၇၀၀) စစ်ဆေးရုံကြီးမှတဆင့် တော်လှန်ရေးနယ်မြေသို့ ထွက်ပြေးပြီး ၂၀၁၀ ဇန် ၁၃ တွင် ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ထိုမှ ဇန် ၁၉ ရက်နေ့တွင်
နောင်တော်များအကူအညီဖြင့် ဘန်ကောက်သို့ရောက်ရှိနေထိုင်ခဲ့သည်။ ယခုအခါ ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်အမျိုးသားတပ်မတော် D.K.B.A တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသည်။
ကပစ (၉)၊ ပန်းတောင်း၊ ကျောက်ဖြူမှ စစ်သည်များ နစ်နာနေရခြင်းအကြောင်း(http://drlunswe.blogspot.com/) မှ
တပ်မတော်အတွင်းက အဖြစ်မှန် ရင်နင့်သံ
စစ်သားများကို မုန်းသည်ဆိုသော စစ်သားတယောက်ရဲ့ သမီး
ပြည်တွင်းရှိ တပ်မတော်သားများနှင့် မိသားစုဝင်များ၏ တပ်တွင်း အခက်အခဲများနှင့် ပြည်သူလူထုဘက်မှ တပ်မတော်သားမိသားစုများ အပေါ် ထင်မြင်ယူဆချက်၊ သဘောထားများ တပ်မတော်သားများမှလည်း ရင်ဖွင့်ပြောကြားလိုသည်များကို အမည် အဆင့်များ ပြောကြားရန်မလိုအပ်ဘဲ ခံစားချက်များကို yekodomo1500@gmail.com၊ armynpeople@gmail.com သို့လည်းကောင်း ဖုန်း ၀၈၉-၆၇၆၈-၂၂၃ သို့လည်းကောင်း ဆက်သွယ်ပေးပို့နိုင်ပါသည်ခင်ဗျာ။
နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ခံစားချက်များကို ကြားခံတင်ပြရင်း တပ်မတော်နှင့် ပြည်သူ ကြည်ဖြူစွာဖြင့် အနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံတော်ခရီးကို
ရဲ ထက် | Create Your Badge
အဖွဲ့ဝင်ပြီး တပ်နှင့်ပြည်သူ ရည်မှန်းချက်ကို ကူညီပါ
ဖိုး သားလေး shared Oppositeyes's photo.
ကလေးတွေကိုလည်း သူ့ သားသမီးလို ဆက်ဆံတယ်။ ကလေး တွေကို ဆုံးမစကားပြောတဲ့အခါမှာ လည်း ဆန့်ကျင်ဘက် နိုင်ငံရေးစကား တွေ ရင့်ရင့်သီးသီး တစ်ခွန်းမှမပါဘဲ လူကြီးတစ်ယောက်က ဆုံးမစကား ပြောသလို ပြောခဲ့တယ်။ ကလေးတွေ ကို ပြန်အပ်လိုက်တဲ့ တပ်ရင်းမှူးက အသက် ၄၀ ကျော်ပဲ ရှိသေးတဲ့ အဲဒီ တုန်းက ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးသိန်းစိန် ပါ .....
Posted by Nay Min Thu at Monday, April 22, 20130comments
Labels: ရင်တွင်းစကား, အမှတ်တရ
Posted by Nay Min Thu at Monday, March 04, 20130comments
Labels: ဖြစ်ရပ်မှန်, ရင်တွင်းစကား
by Seaman Nayminthu on Friday, February 22, 2013 at 11:18am ·
အားလုံး တသဘောတည်း အညီအညွှတ်မဟုတ်တဲ့တိုင် သန်ရာသန်ရာ ဖွင့်ဆိုချက်တွေကို ယေဘူယျ ကောက်ချက်ဆွဲ ကြည့်မယ်ဆိုရင်….
Posted by Nay Min Thu at Friday, February 22, 20130comments
တပ်မတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ခေတ်အလိုက် မျိုးဆက်အလိုက် တဦးချင်းအလိုက် အကန့်လေးတွေ ပိုင်းခြားပြီး မြင်စေချင်ပါတယ်။
Posted by Nay Min Thu at Saturday, February 09, 20130comments
အတိုက်အခံပါတီဝင်ကို ပထမဆုံးအကြိမ် အစိုးရက ဒုဝန်ကြီးခန့်
NDF အမျိုးသားဒီမိုကရေစီတပ်ပေါင်းစု အမျိုးသားလွှတ်တော် အမတ် ဒေါက်တာတင်ရွှေ ကို ဟိုတယ်နဲ့ ခရီးသွားလာရေးဆိုင်ရာ ဒုတိယ၀န်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်လိုက်တဲ့အကြောင်း မြန်မာအစိုးရ က ကြေညာပါတယ်။ အင်္ဂါနေ့တုန်းက သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ကနေ သူ့အစိုးရအဖွဲ့အတွက် ဒုဝန်ကြီး ၅ ဦး ကြေညာသွားရာမှာ တဦးအပါအ၀င်ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာအစိုးရ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်အနေနဲ့ အတိုက်အခံပါတီ အမတ်တယောက်ကို အစိုးရအဖွဲ့အတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ် ၀န်ကြီးအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် လက်ခံလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါက်တာတင်ရွှေ ဟာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အမျုိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်မြေ အမှတ် ၆ က ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။
NDF ပါတီကတော့ အခုလို ပါတီဝင်တယောက် ၀န်ကြီးအဖွဲ့မှာ ပါဝင်လာအောင် အစိုးရနဲ့ တစုံတရာ ကြိုတင်ညှိနှိုင်းတာမျိုး မရှိခဲ့ဘူးလို့ ပြောဆိုတာကို AFP သတင်းမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒီလို ပါတီဝင်တယောက် အစိုးရအဖွဲ့မှာ ပါဝင်လာတဲ့အတွက် အစိုးရပြောသမျှ လိုက်နာမယ့် သဘောမျိုး ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘဲ၊ အတိုက်အခံပါတီတခုအနေနဲ့ ပြည်သူတွေ လက်မခံတဲ့ကိစ္စတွေကို ဆက်ပြီး ဆန့်ကျင်သွားမယ်လို့လည်း NDF ပါတီခေါင်းဆောင် ဦးခင်မောင်ဆွေက ပြောပါတယ်။
NDF ပါတီဟာ ၂၀၁၀ ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲအတွင်း NLD ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင်ဟောင်း ဒေါက်တာသန်းငြိမ်းနဲ့ ဦးခင်မောင်ဆွေတို့ ဦးစီးပြီး ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့ သီးခြားထူထောင်ခဲ့တဲ့ ပါတီဖြစ်ပါတယ်။
Posted by တပ်နှင့်ပြည်သူ at Thursday, February 07, 20130comments
"ပြည်တွင်းလုပ်သားများအား တစ်ရက်လျှင် လေးဒေါ်လာ အနိမ့်ဆုံးပေးရန် တောင်းဆိုမည်"
ပြည်တွင်းရှိ လုပ်သားများအား အသစ်ထပ်ဝင်လာမည့် ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတို့က တစ်နေ့အနိမ့်ဆုံးလုပ်ခ တစ်ရက်လျှင် ၄ ဒေါ်လာအထိပေးရန် တောင်းဆိုသွား မည်ဟု ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌက ပြောသည်။
ကျွမ်းကျင်မှုအလိုက် လုပ်အားခကို ၄ ဒေါ်လာ သတ် မှတ် ပေးရန် ပြောဆိုမည်ဖြစ်ပြီး အမှန် တကယ်ပေးရန်လည်း တွန်းအား ပေးသွားမည်ဟု ၄င်းက ဆို သည်။
”မလုပ်လို့ မရဘူးလေ။ ဒီလို ပဲ လုပ်ပေးရမှာပေါ့။ ၃ ဒေါ်လာ၊ ၃ ဒေါ်လာခွဲ ဒီလိုနဲ့ တိုးတိုးပြီး တောင်းလာရမှာပေါ့။ လုပ်သားတွေ အကျိုးရှိတဲ့ အလုပ်တွေ ပေးတဲ့ ပြည်ပ ကုမ္ပဏီတွေကို များများ ဖိတ်ခေါ်ရမှာပေါ့” ဟု ရင်းနှီးမြှုပ် နှံမှု ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ က ဆက် ပြောသည်။ ပြည်ပ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတို့ က မြန်မာ့အခြေခံ လုပ်သားတို့ အပေါ် လစာနှိမ်ပေး မှုကြောင့် ၂ဝ၁၂ ခုနှစ် အတွင်းက စက်ရုံ အတွင်း ဆန္ဒပြမှု ၁ဝဝဝ ကျော်၊ လမ်းမပေါ် ခွင်ပြုမိန့်ဖြင့်ဆန္ဒပြမှု ၄ ကြိမ်ရှိခဲ့ သည်။အလုပ်သမားရေးရာ တက် ကြွလှုပ်ရှားသူ ဦးကျော်မင်းကMIC ဥက္ကဋ္ဌ အနေဖြင့် ဆောင် ရွက် ပေးမည် ဆိုပါက ကြိုဆိုရမည် ဖြစ်သော်လည်း မှန်၊ မမှန်ကို စောင့် ကြည့်မည်ဟု ပြောသည်။ ”အခု ဒီမှာ လစာက အနိမ့် ဆုံးကို ကျပ် လေးသောင်းရှိတယ်။ ကျပ် ငါးသောင်း ရှိတယ်။ ပုံမှန် မရှိဘူး။ တစ်ပြေးညီ စံနှုန်းတစ်ခု ဖြစ်ရင် ကောင်းတာပေါ့” ဟု ဦး ကျော်မင်းက ပြော သည်။ အလုပ်သမား ဝန်ကြီးက အခြေခံ လုပ်သား လစာကို ယာ ယီအားဖြင့် ကျပ် ၅၆၇ဝဝ သတ် မှတ်ထားသည်ဟု စာရင်းများအရ သိရသည်။
Credit to :Popular Myanmar News Journal
7th February (11:00 am) Exchange Rate
FEC >> Buy 856 ~ Sell 860
USD >> Buy 856 ~ Sell 860
SGD >> Buy 690 ~ Sell 695
EURO >> Buy 1150 ~ Sell 1160
By AGD Bank (အာရှစိမ်းလန်းမှုဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်လီမိတက်)
VanSangVa - Basic Democracy Training - Burmese Version by Salai Kipp Kho Lian
Copyright (c) 2010 တပ်နှင့်ပြည်သူ. Designed by Cool Blogger Templates